गच्छदारको पुनरागमन  Sourya Online
अञ्जु कार्की २०७५ कार्तिक २८ गते ७:१० मा प्रकाशित
देउवाले पूर्व सर्तअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गर्न ढिलाइ गर्दै गए । यो ढिलाइलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरेका थिए । भ्रष्ट नेता र ठग कार्यकर्ता मुक्त कांग्रेस बनाएर देउवाले गतिलो विकल्प देलान भन्ने अनुमान धेरैको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले यतिवेला प्रतिपक्षमा रहँदा पनि लोकप्रियता बढाउन सकेको छैन । सामान्यतया कुनै पनि दल सत्तामा रहेको वेला अलोकप्रिय हुने र प्रतिपक्षमा रहेको वेला लोकप्रिय हुने राजनीतिक नियम नै हो । यतिवेला स्वाभाविक रूपमा सत्तारुढ नेकपाको लोकप्रियता खस्केको छ । तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता पनि खस्किएको छ ।
प्रतिपक्षको लोकप्रियता खस्कनु मुलुकको शासन व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत भने होइन । प्रतिपक्षी पार्टी भनेको सत्तारुढ पार्टीको विकल्प हो तर यतिवेला जनताहरू विकल्पप्रति समेत आशावादी हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्ने भनेको प्रतिगामी शक्ति वा विद्रोही शक्तिले हो । यतिवेला विद्रोही शक्ति विप्लव माओवादी जति उत्साहित छ, प्रतिगामी शक्ति राजावादीहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा आशावादी छन् ।
गतसाता कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कांग्रेसले के गर्नुपर्नेमा के ग¥यो ? सुझावमूलक प्रश्न सोध्नुहोस्, आरोपका लागि आरोप नलगाउनुहोस् ।’ तर, प्रश्नकर्ता पत्रकारको पूर्व तयारी नदेखिएका कारण स्रोतालाई खल्लो महसुस भयो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको यति लामो समयसम्म पनि नेपाली कांग्रेस किन एकात्मक विधानअनुसार चलिरहेको छ ? १४औँ महाधिवेशनको नियमित मिति आउन लागि सक्दासमेत किन पार्टीको केन्द्रीय संगठनले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ? भ्रातृ संस्थाहरू किन निस्क्रिय छन् ? यी र यस्तै पेचिला प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसबाट जनताले खोजिरहेका छन् । वास्तवमा कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा दरिलो भूमिका निर्वाह गर्न नसकी जनतालाई निराश बनाएको यही कारणले हो ।
भ्रष्ट नेता र ठग कार्यकर्ताको सञ्जाल तोड्न नसकेकै कारण आफू अनिर्णयको बन्दी भएको पीडा सभापति देउवाले आफ्ना निकटस्थसँग पोख्ने गरेको सुनिन्छ । यो जञ्जाल तोड्नुको सट्टा यही जञ्जाललाई नै निरन्तरता दिन सभापति देउवाले सहज ठानेका हुन् कि ? भन्नेजस्तो पछिल्लो समयमा देखिएको छ ।
देउवाले हालै विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गरेका छन् । गच्छदारको पृष्ठभूमि राजनीतिमा चासो राख्ने आमनेपालीलाई थाहा छ । गच्छदार नेपाली राजनीतिका व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति हुन् । ०४८ सालपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति हाबी भयो । सत्ताको दुरुपयोग गरेर पैसा बटुल्ने र त्यही पैसा कार्यकर्ताहरूमा लगानी गरी आफू शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्तिले सबै पार्टीमा जरो गाड्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा वामदेव गौतमहरूको उदय भयो, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा गच्छदारहरूको उदय भयो । करिब एक महिनाअघि मात्रै सत्तारुढ नेकपाभित्र वामदेवको प्रवृत्ति उत्कर्षकमा पुगेको थियो । गत आमनिर्वाचनमा चुनाव हारेका वामदेवलाई काठमाडौंको क्षेत्र नं ७ खाली गराएर प्रतिनिधि सभामा ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा जनताले हस्तक्षेप गरे ।
जनताको यो हस्तक्षेपपछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हात झिके । अब सत्तारुढ नेकपामा वामदेव प्रवृत्तिको ढाड भाँचिएको विश्लेषण गरिएको छ । तर, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा भने यो प्रवृत्तिको पुनरागमन भएको छ । विधानबमोजिम गर्नुपर्ने तमाम काम थाति राख्दै कांग्रेस सभापति देउवाले गच्छदारलाई उससभापति बनाएका छन् ।
को हुन् गच्छदार ?
०४८ सालपछि मुलुकमा सम्पन्न सबै आमनिर्वाचनमा चुनाव जित्ने नेताहरू नेपालमा २ जना मात्रै छन् । ती दुई जनामध्ये देउवा र गच्छदार मात्रै हुन् । ०५३ सालसम्म नेपाली कांग्रेसमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित हुन्थे । ०५३ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट एक-एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो । जसमा पूर्वाञ्चलबाट गच्छदार, मध्यमाञ्चलबाट भीमबहादुर तामाङ, पश्चिमाञ्चलबाट रामचन्द्र पौडेल, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट सुशील कोइराला र सुदूर पश्चिमाञ्चलबाट शेरबहादुर देउवाले चुनाव जिते ।
त्यतिवेलादेखि नै गच्छदार नेपाली कांग्रेसको भावी नेताका रूपमा स्थापित भएका हुन् । त्यतिवेला चुनाव जित्ने ५ मध्ये सुशील कोइराला, देउवा र पौडेल नेपाली कांग्रेसको नेताका रूपमा स्थापित भए । भीमबहादुर तामाङ दिवंगत भएका कारण सम्भावना रहेन । तामाङसँग चुनाव हारेका विमलेन्द्र निधि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका छन् ।
सुशीलसँग चुनाव हारेका पूर्णबहादुर खड्का पनि कांग्रेसको राजनीतिमा स्थापित भएका छन् तर गच्छदार भने बीचमा पार्टी छाडेका कारण संकटमा परेका थिए । पुनः कांग्रेसमा फर्केर उपसभापति बनेका कारण गच्छदारले कांग्रेसको नेतृत्व लिन सक्लान त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
कांग्रेसमा रहुन्जेल ०४८ देखि ०६४ सालसम्म व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बलिया गच्छदार नै थिए । उनी निरन्तर मन्त्री बनिरहन्थे । उनले जुन लवीलाई साथ दियो उसैले बाजी मार्ने अवस्था थियो । अब कांग्रेसमा फर्केर उपसभापति पद प्राप्त गरिसकेपछि गच्छदारको पुरानै हैसियत रहने कुरामा शंका नरहेको धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मुलुकमा थारूको जनसंख्या करिब ६ प्रतिशत छ । थारू समुदायमा नेपाली कांग्रेसभित्र गच्छदारको एकलौटी वर्चश्व छ । कांग्रेसका करिब ३ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करिब ३ सय जना अर्थात् १० प्रतिशतमा गच्छदारको होल्ड रहने अवस्था छ । यो १० प्रतिशतले जसलाई साथ दियो उसैले सभापति पदमा चुनाव जित्ने अवस्था छ । यही कारण देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति पदमा मनोनित गरेका हुन् ।
आगामी महाधिवेशनमा बिमलेन्द्र निधि आफैँसभापति पदमा उम्मेदवार हुने सम्भावना बढेका कारण पनि गच्छदारसँग सम्झौता गर्न देउवा बाध्य भएका हुन् । गच्छदार र देउवाबीचको यो सम्झौताले सबैभन्दा बढी घाटा निधिलाई परेको नेपाली कांग्रेसका विश्लेषकहरू बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा निधिभन्दा गच्छदार बलिया छन् । विश्लेषकहरू भन्दछन्, ‘निधिसँग नैतिक तथा बौद्धिक ताकत मात्रै हो, कार्यकर्तामा बलियो पकड छैन तर गच्छदारसँग आर्थिक ताकत छ र कार्यकर्ता मिलाउने बलियो पकड पनि छ ।’
विगतमा कोइराला परिवारको हुनमानका रूपमा गच्छदारलाई लिइन्थ्यो । कोइराला परिवारभित्र पनि उनी नोना कोइरालासँग नजिक थिए । उनलाई कतिपयले नोना आमाको धर्मपुत्र पनि भन्थे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजातालाई अघि सार्दै भाउजू नोनाका लागि जुन दिन मूलढोका बन्द गरिदिए, त्यसैदिनदेखि गच्छदार देउवा लवीतिर लागेका हुन् । ०५९ सालमा देउवाले पार्टी विभाजन गरे ।
उक्त पार्टीको महामन्त्री खुमबहादुर खड्का र सह–महामन्त्री गच्छदार बने । खुमबहादुर कोइरालातिर फर्केपछि देउवाले गच्छदारलाई महामन्त्री बनाए । तर, गच्छदार १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता तथा जनआन्दोलन ०६२-६३ को विपक्षमा उभिए । जनआन्दोलनमा सहभागी नभएपछि देउवाले गच्छदारलाई हटाएर निधिलाई महामन्त्री बनाए । यही दिनदेखि गच्छदार देउवाको विपक्षमा खुलेरै उभिए ।
जनआन्दोलन ०६२-६३ पछि संसद् पुनर्बहाली भयो । संसदीयदलको पुनः निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा गच्छदारले देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिए । देउवाले २३ मत पाए भने गच्छदारले १८ मत । झिनो मतको अन्तरले संसदीयदलको नेता निर्वाचत भएपछि देउवाले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता गरी पार्टी एकीकरण गरे । एकीकरणपछि गच्छदार कोइराला र देउवा दुवैको खेदाइमा परे ।
दुवै लवीको खेदाइलाई गच्छदारले थेग्न सकेनन् । उनी ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व–सन्ध्यामा दलबलसहित मधेसी जनाधिकार फोरममा प्रवेश गरे । आफ्ना केही कार्यकर्ताले टिकट नपाएपछि उनी कांग्रेस छाडेर मधेसी जनाधिकार फोरममा प्रवेश गरेका हुन् । गच्छदारलाई शक्तिविहीन बनाउने मामिलामा कोइराला र देउवा एक ठाउँमा उभिएका थिए । गच्छदारले छाडेपछि कांग्रेसले तराईमा निकै ठूलो क्षति बेहो¥यो । तर, गच्छदारले भने चुनाव जितेर निरन्तर उपप्रधानमन्त्री बनी नै रहे ।
गत निर्वाचनमा गच्छदार न त मधेसी दलसँगको एकतामा सहभागी हुन सके, न त वामगठबन्धनमा । यता वामगठबन्धन बनेका कारण कांग्रेस संकटमा प¥यो । यो संकटबाट पार पाउन गच्छदारले आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराए । त्यतिवेलै उनले आफूलाई सेकेन्ड म्यान र आफ्ना १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
कांगे्रसले यो सर्त मानेको थियो । चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जित्यो जसमध्ये सुनसरीका ३, रौतहटको १ र बर्दियाको १ गरी ५ सिट गच्छदारको कारणले जितेको हो । समानुपातिकतर्फ पनि गच्छदारका कारण २ सिट थपिएको छ । गच्छदारकै कारण सभापति देउवाले संसदीयदलको नेता पदमा चुनाव जितेका हुन् ।
यदि, गच्छदारले प्रकाशमानलाई समर्थन गरिदिएको भए देउवाका लागि निकै भारी पर्ने अवस्था थियो । तर, पनि देउवाले पूर्व सर्तअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गर्न ढिलाइ गर्दै गए । यो ढिलाइलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरेका थिए । भ्रष्ट नेता र ठग कार्यकर्ता मुक्त कांग्रेस बनाएर देउवाले गतिलो विकल्प देलान भन्ने अनुमान धेरैको थियो ।
होली वाइनले पवित्र पारेका आत्मा
पौराणिक कालमा विवाह महोत्सव
सामाजिक सुरक्षा योजनाको महिमा
मानव अधिकार संरक्षणका लागि ‘जागरुक नागरिक समाज’
चलचित्र आवश्यकता कि व्यवसाय ?
जता हेर्यो, त्यतै सरकार
काठमाडौँसहित देशभर चिसो बढ्यो
यौनधन्दा गर्ने १८ जनाविरुद्ध मुद्दा
प्रधानमन्त्री निवास अघि प्रदर्शन गर्ने अधिकारकर्मी पक्राउ
मन्त्री विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
सामुदायिक वनमा नीलगाई देखियो
इपिएलमा काठमाडौँद्वारा चितवन पराजित
सीमाका तुइन विस्थापनमा भारतीय असहयोग
सांगीतिक क्षेत्रमा अब्बल ‘पिएन सापकोटा’
कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त
भर्याङबाट लडेर युवकको मृत्यु
चलचित्र क्षेत्रनै मेरो जीवन हो : खरेल